Ny Asa ao amin'ny Golfa ho an'ny Indiana dia ratsy sy mendrika ho an'ny miasa any ivelany
Asa ho an'ny Golfa ho an'ny Indiana
Expatwoman Dubai - Mitadiava asa any Moyen Orient
Janoary 31, 2018
Torolàlana momba ny asa an'ny Cryptocurrency ho an'ny fotoana karaman'ny BlockChain
navoakan'ny Dubai City Company at Febroary 18, 2018
Asa an-tanety ho an'ny Indiana lasa lohahevitra malaza ao amin'ny Emira Arabo Mitambatra raharaham-barotra. Amin'ny tranga iray Indian. Ary mitady ho an'ny asa any amin'ny firenena any Telona. Mazava ho azy fa tokony hamaky ny lahatsoratra izahay. Aleo ampahafantarinay aminao ny asanay. Izahay dia orinasa fandraisana mpiasa izay manampy ireo mpikatsaka asa any ivelany mitady asa any Emirates ary ny Golfa. Etsy andaniny, manampy karazana mpihaza avy any Inde izahay.
Ka raha manosika anao ho ampy ianao. Afaka manampy anao hapetraka izahay. Indrindra indrindra any amin'ny firenena Golfa. Firenena Arabo avy amin'ny Hoala Persika. Ny fanjakana Arabo fito. Hatreto dia mametraka ny mpifaninana Indiana 75k izahay. Ny ankamaroan'ny Indianina any Koety ny United Arab Emirates ary koa ao Qatar sy Arabia Saodita. Asa an-kianjan'ny Indiana voaroakan'ny ny ekipanay dia hanampy anao hahavita izany.
Amin'ny lafiny lafy tsara any amin'ireo firenena Arabo ny helokan'ny Persianina. Azonao atao ny mahita mpiasa vitsivitsy manakarama eo amin'ilay jiro. Ohatra iray amin'izany dia misy ny orinasan-tsolika. Io karazana orinasa io dia malaza be. Indrindra miaraka amin'ny indostrian'ny zom-pirenena indiana. Fa alohan'ny handrosoanay. Tokony ho fantatrao ny vokatra ratsy. Ohatra, Mpisera Indiana izay tena izy tokoa miasa any amin'ny Helodrano. Misy mpiasa mihoatra ny 7 tapitrisa ao amin'ny Faritr'i Gulf.
Ny fomba fiainan'ny Golfa sy ny asany
Indiana sy fomba fiaina any Golfa. Hatramin'ny nanombohan'ny nifindran'ireo Indianina tany Arisula Penisula. Tonga mponina eo an-toerana izy ireo. The lehibe ny ankizy amin'ny kolontsaina arabo. Etsy ankilany. Rehefa mifindra any Qatar ohatra ianao. Rehefa vita ny 10 taona dia lasa Qatari ianao. Miova ny fisainanao. Satria hanana fomba mazava kokoa ianao amin'ny hoavinao. Amin'izao fotoana izao dia mitombo kokoa Ny asa dia ho azonao any Dubai sy Abu Dhabi. Ary ny lafiny maro hafa dia miakatra sy midina.
Iray amin'ny ny zavatra tsara indrindra momba ny fomba fiainanao ao amin'ny GCC. Tsotra tokoa ny Arabie Penisula manome safidy maro anao amin'ny fiainana salama tsara sady sambatra. Ny rafi-pampianarana avo any Golfa dia tena manampy anao indrindra manomboka asa vaovao any Afovoany Atsinanana. Na toerana ambony kokoa aza eo amin'ny toeram-piasanao. Azonao atao ny miova mora foana amin'ny sehatry ny asa raha mbola tanora ianao. Tonga indray mandeha izany rehetra izany. Manome anao a mitombo ny fahafahana matihanina amin'ny fitomboana manokana.
Maro ny fandraisana mpiasa maso iraisam-pirenena izay manindry ny Indiana any Dubai. Ary mazava ho azy fa lasa ny Moyen Orient haingana. Iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fitadiavana toerana karama be karama. Na dia ny tsara indrindra aza azo atao orinasa manana birao any Dubai, Doha, tanànan'i Kuwait. Azo atao ny orinasa ny Golfa ho an'ny Indiana.
Governemanta Golf ary asa
Ny ankabeazan'ny expanta Indiana. Mahafantatra tsara manao ahoana ny miasa any amin'ny firenena any Golfa. Afaka mahita mpiasa indianina tena mahay ianao Dubai sy Doha. Hatramin'ny tonga any amin'ireo firenena GCC ireo mpikatsaka ny asa iraisam-pirenena. Ny fitsipika vaovao dia natsangana ary nosoloina tamin'ny fomba nentim-paharazana silamo nentin-drazana. Ny toeran'ny asa any Gulf be dia be asa any Dubai.
Ny firafitry ny governemanta ankehitriny avo lenta manam-pahefana eto amin'ny firenena. Ny fomba kalitao avo lenta sy karama mifaninana. Ary mazava ho azy ny ny fomba fiasa tsara indrindra amin'ny fanjakana Aris Penisula. Misintona be dinika vaovao ho tonga any Dubai ary mendrika izany. Koa misy fiaraha-monina matanjaka ao amin'ny firenena GCC. Miara-miasa izy ireo mba hanampiana ny hafa hitombo ao anatiny.
Amin'ny lafiny iray, ny mpiasa any India dia tsy hafa noho ny hafa. The mpikarakara mpikarama azo inoana fa mijery ny tohin'ny asiansy ary nametraka azy ireo any Moyen Orient. Mpanatanteraka sy tsara nahita fanabeazana izy ireo. Orinasa miasa any Dubai asa sy asa fitadiavana any UAE tsena mivantana. Ary ireo firenena any Golfa miezaka manohana ny orinasam-baovao rehetra izay mandray andraikitra amin'ny fampiasana ny mpiasa manerantany.
Indian help handoavana ny miasa any ivelany
Misy karana 7 an-tapitrisany maro. Amin'izao fotoana izao miasa any amin'ny Golfa. Na orinasa manangona CV sy manao mihoatra noho izany aza. Amin'izao fotoana izao dia manakarama tsy Indianina mpila ravinahitra any ivelany izahay. Fa koa Pakistane, ary koa Filipino mpiasa ho an'i Dubai. ary Afrika Atsimo. Raha ny marina dia manana tahiry lehibe isika. Ary miorina amin'izany.
Ka maro ny mpitsidika indrindra indrindra avy any Azia. Received tolotra asa avy amin'ny indostrian'ny hotely sy ny varotra. Tao anatin'ireo toe-javatra ireo dia efa nifindra ho amin'ny a job opportunities in Dubai. Izy rehetra dia nampiasa ny serivisy fandraisam-bahiny any Dubai. Asa ho an'ny indian avy any Golfa ho an'ny mpitsoa-ponenana Manampy ny tanana izahay.
Inona no atao hoe miasa any amin'ny firenena Golfa?
Amin'ny lafiny iray, na aiza na aiza dia mitovy daholo ny toerana ihetsehanareo. fa ahoana ny fomba fiasa ao amin ny Golfa?. Am-pahatsorana, ny sehatra dia mitovy amin'ny firenena hafa amin'ny sisa amin'ny lahatsoratra. Tokony ho fantatrao ahoana no hampiroboroboana sy hivarotra ny tenanao amin'ireo mpampiasa any Dubai ohatra. Ny olona vaovao rehetra izay hifindra amin'ny GCC. Tsy maintsy mahita ny fomba hidirany mahita asa.
Ny fanontaniana fotsiny dia voavaly fotsiny amin'ny olona iray mahalala ny tsena. Iza no manana ny traikefa arak'asa ?. Izay indrindra dia afaka valiana amin'ny iray amin'ireo foibe antso an-tsokosoko ao amin'ny Golfa. Ohatra, betsaka ny Karana. Mahazo asa tena tsara izy ireo ?. Ary ho azo antoka mitady ny hijanona sy hiasa ao amin'ny Golfa. Saingy ny mpikaroka asa rehetra dia mila mahafantatra ny fomba ho raisina. Inona ny ny vavahady tsara indrindra any UAE?. Ahoana ny fomba anokafana amin'ny Internet. Ary aiza no handefasako ny antsipiriany.
Ny firenena Golfa ho an'ny Indiana dia misokatra malalaka ho an'ny mpikaroka maneran-tany. Misy ihany koa ny maro asa fitadiavana asa tokony hifaneraserana amin'ny sehatra misy anay. Ity dia iray amin'ireo fomba fiasa. Ary toy izao no tokony hanombohanao hieritreritra momba ny fifindrana mankany amin'ny fomba fiaina vaovao. Ohatra, afaka mijery ianao inona ireo firenena mpitsoa-ponenana indiana?.
Afaka mahita lahatsoratra vitsivitsy vitsivitsy ianao. Momba ny asa any an-jambany sy Emirates. Tsy ho hainao mihitsy anefa izany mandra-pahatonga ny tenanao amin'ny toerana voafidy hipetrahana. Trano asa ho an'ny Indiana ny super malaza any UAE.
Asa ho an'ny indian avy any Golfa ho an'ny mpitsoa-ponenana
Ny asa ao amin'ny toeram-piasana tsara indrindra any Gulf
Miaraka amin'izany, ny ekipa te-hametraka anao ho GGC. Ny antsipiriany vitsivitsy momba ny asa any Gulf ho an'ny Indiana mila fantatrao. Iray amin'ireo zavatra tsy maintsy tadidinao alohan'ny handrosoantsika. Rehefa miasa ao amin'ny Golfa ianao. Afaka mahazo vola bebe kokoa noho ny firenena ao an-tranonao ianao. Zava-misy io azonao atao ny mandinika ny momba anao Torolàlana ho an'ny mpitady asa any Golfa. Ohatra, afaka mampitombo ny karamanao ianao. Ampitahao amin'ny orinasa Indiana. Ireo tarehimarika ireo dia mihamitombo sy miova.
Ohatra, ao amin'ny vondrona miasa amin'ny kilasy Afovoany. Afaka mahita tantara tsara vitsivitsy ianao. Indrindra ny momba ireo Indiana izay nanao ny diany hahomby. Gaga fa misy tantara maromaro any Moyen-Orient. Ohatra ny fomba nifindra tany Dubai ny mpanatanteraka Indiana. Nahoana izy ireo no manana nisafidy asa matihanina tany Arabia Saodita.
Betsaka ny antony. Nahoana ianao no tokony hanao izany misafidy ny hiasa ao amin'ny Golfa. Toa izay miasa any Eropa na Etazonia. Iray amin'ireo ohatra momba ny fomba ahafahana mamolavola matihanina amin'ny asanao ianao. Fivoarana manokana ve any ivelany. Hatramin'ny nahatratrarana haavon'ny fitantanana anao. Iray amin'ireo liana sy tena tsara Mpiasa any Afrika Atsimo ao Dubai. Rehefa mifindra amin'ny Moyen Orient ianao. Avy eo dia hahita be dia be ny matihanina miasa iraisam-pirenena ianao. Tena mahafinaritra ny miresaka amin'ny mpiasa eran-tany hafa. Ho be dia be ianao traikefa sarobidy.
Manomboka ny asan'ny Golfa amin'ny maha-indianina azy
Ho afaka hitantana teti-bola ianao. Ampy mba hahazoana renivohitra ary izao dia mitantana ny fanombohana anao manokana. Mazava ho azy, sarotra indraindray rehefa mifindra ianao. Rehefa mifindra any amin'ny firenena any amin'ny Golfa ianao. Ohatra tena tsara amin'ny fomba fisondrotana sy famirapiratra dia ny Moyen Orient. Ohatra, malaza izany Dubai no toerana tsara indrindra eto an-tany. Koa mila mifidy am-pahendrena ianao. Inona no tena tanjonao, ary iza no tianao ho tonga?
Aleo ampitahao ny vidim-piainana ao amin'ny ankamaroan'ny firenena any Teluk. To trano fonenana ao India ohatra. Ianao dia mila mandany vola bebe kokoa noho ny tanàna lehibe any India. Amin'ny lafiny iray, manampy ny isa satria tsy misy hetra amin'ny vola azonao. Ary koa, lafin-javatra tena tsara tokoa. Ohatra ny fiantraikan'ny fanandramana miasa amin'ny The Arab State of Penisula.
indrindra raha tianao ny hifindra any ivelany sy hiasa any Dubai. Sarobidy kokoa ny ho avy. Rehefa tonga manodidina ny 40 taona ianao. Mety ho asa sarotra ny fikatsahana asa. fa miaraka amin'ny traikefa arak'asa miaraka amin'ny iray amin'ireo firenena toa an'i Qatar na Saudi Arabia. Amin'ny ankapobeny, dia afaka mamonjy ny asanao mafy.
Miasa any amin'ny firenena GCC
Hevitra iray tsara hafa koa ny mahita asa momba ny banky ary ny famindrana vola any India. Nandritra ny niasa tao amin'ny GCC. Rehefa miasa any UAE ianao. Tsy takian'ny lalàna izany. Mandoa hetra. Ka alohan'ny handany vola dia tokony ho tahirinao izany. Fandefasana vola any ivelany any amin'ny kaontin'ny banky ao India. Tsotra ny fifanarahana amin'ity raharaha ity. Ny avo kokoa fonosana karama ao amin'ny Golfa. Arakaraka ny vola azonao atao. Amin'ny lafiny tsara, avelao ianao hamonjy vola bebe kokoa.
To the conclusion asa ho an'ny Indiana any Emirà Arabo Mitambatra ary GCC. Ny taona vitsivitsy voalohany niasanao tao amin'ny GCC. Angamba mafy ary tsy hahita vidiny firy ao ianao. Saingy ny zava-drehetra dia nandany fotoana handinihana azy. Tamin'ny taona 2 na 3 voalohany. Mety ho hitanao fa indianina iray tsara karama kokoa ny karama raha ampitahaina amin'ny vidim-piainana. Ankoatr'izay, ny vidim-piainana dia tsara kokoa. Fa miandry fotoana kely fotsiny. Mahazoa traikefa tsara. Atsangano ny fenitra matihanina anananao.
Avy eo indray mandeha no nahazoanao ny zavatra niainanao. Tao anatin'ny orinasa malaza tao an-tanàna. Ho ela dia ho hitanao izany. Manana fifandanjana banky fandefasana betsaka kokoa ianao. Ary ny nitombo ny tetibola. Na dia avo lavitra noho izay mety ho nanananao tany India aza. Etsy ankilany, raha ianao dia mahaliana bebe kokoa momba ny tanànan'i Dubai. Azonao atao ny manamarina izany na mahita valiny vitsivitsy fotsiny Google na Facebook.
Famelabelarana fanadihadiana ao Golfa
Fampahalalana hafa mahaliana nandao ny tafatafa tamin'ny asany tany Moyen-Orient. Mila mahafantatra tsara izay tokony hatao ianao. Raha ny marina, mandalo ny tafatafa any amin'ny firenena Golfa. Tahaka ny hoe ao amin'ny tafika ianao dia misy tifitra iray azonao entina. Mila miomana amin'ny hevitra rehetra ianao.
Na dia mahazo a fanadihadiana mandeha an-tongotra ao Dubai. Tsy mora ny mahita. Ny sasany amin'ireo lafiny izay tsy ho tafiditra ao anatiny toerana ho anao. Ohatra, mila mahafantatra ny fitsipika ao amin'ny tontolo arabo matihanina ianao. Na dia any India aza ianao dia tokony ho toy izany niomana ny handeha amin'ny dinidinika momba ny asa any Dubai. Mila mijery maranitra ianao. Ankoatr'izay, mila miresaka tsara ianao ny mijery tahaka ilay olona manana fahitana. Ary eo amin'ny lafiny tsara no fotoana hanandratanao ny tenanao amin'ny mpikarama. Io ny lazan'ny 30 anao malaza.
Ny Asa ao Golfa ho an'ireo Indiana any amin'ny Emirà Arabo Mitambatra.
Firenena any amin'ny Golfa ho an'ny mpitsoa-ponenana
Tsy ny mpikaroka asa rehetra no hotahiana mba hahazo asa an-tsaka ho an'ny Indiana. Ny sasany amin'ireo sidina iraisam-pirenena dia mety tsy hahita tombontsoa amin'ny asa. Alohan'ny hifindranao amin'ny GCC tsy maintsy ho tsaroana fa mandray risika ianao. Aleo arotsaka ao ny sarany. Maherin'ny 40% an'ny mpifindra monina avy any India miverina any an-tanindrazany. Tena misy tokoa ny ady mafy amin'ny toerana misy azy rehetra any UAE. Ankoatra izay, mitady asa any Qatar sy Arabia Saodita koa ny olona. Ny firenen-kafa tsy dia nalaza toa izany. Indrindra rehefa mitady mpiasa ny Indiana teo.
Amin'ny taona manaraka ny orinasa dia nahita firoborobo mitombo. Ny iray amin'ny toerana famindrana liana dia i Koety. Eto amin'ity firenena ity ny zom-pirenena indiana. Amin'ny ankapobeny, arahabaina am-pitiavana. Ny sehatry ny IT sy ny sehatra ara-bola dia miroborobo eto Kuwait. Ka raha ianao e manana fanabeazana MBA. Izany dia tena toerana ho anao. Etsy andaniny, ny hatsaran'ny asa ao Koety dia tsara ho an'ireo mitady ny Indiana.
Ho fehiny amin'ny asa any an-tsaha ho an'ny Indiana. Iza amin'ny firenena no tena tianao indrindra. Tena hiankina amin'ny zavatra niainany sy ny fianarana nataonao ihany koa. Ny UAE dia lasa No.1 ho an'ny Indiana. Afa-tsy i Qatar fotsiny. Fa amin'ny lafiny ratsy amin'ny Qatar. Ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manolotra asa momba ny fifanarahana fotsiny. Iray amin'ireo ohatra ireo orinasa any Dubai izay manamboatra ny Mondialy 2022 any Qatar. Ny ankamaroan'ny fifanarahana ara-barotra avy amin'ny tompon'ny orinasa Qatari. Tsy misy afa-tsy asa vita amin'ny fifanarahana. Fa amin'ny lafiny iray, adidy tsara karama izany.
Ny Golfa ho an'ny vehivavy vahiny
Tokony hotsaroantsika ny momba ny mpivady. The Vehivavy miasa any amin'ny Golf nanjary zavatra mahazatra ny firenena. Ankehitriny na dia any Saudi Arabia aza dia afaka mitondra fiara. Iray amin'ireo firenena tsara indrindra ho an'ny vehivavy expatriate dia ny Emirà Arabo Mitambatra. Ohatra, any Dubai sy Abu Dhabi vehivavy avy any India mandeha orinasa lehibe iray.
Ao an-tsaina na dia raha mitodika any Dubai na Abu Dhabi ianao. Afaka manasa ny vadinao. Ary manampy azy hahita asa. Any Dubai, misy tranonkala asa maro. Ny vehivavy Expat dia afaka mikaroka mora foana amin'ny fikasana nofinofy. Mitombo ihany koa ny resaka Tantaran'i Dubai City mpitari-dalana mba hijery. Tokony hanana fijerena fotoana ahafahan'ny vehivavy ianao.
Misy firenena misokatra kokoa. Ny vehivavy dia afaka mahita asa. Iray amin'ireo tsara indrindra firenena hiasa any ivelany ho an'ny vehivavy monina ao Dubai. Avy amin'ny fikarohana nataontsika. Manoro hevitra izahay ny mety hisian'ny mpiasa mpila ravinahitra any ivelany. Raha hijery ny firenena toa an'i Bahrain sy Oman. Raha manana traikefa tsara ianao ao anatin'ny fotoana fohy dia hahazo taratasy fangatahana asa ianao. Na dia ho an'ny asa fanombohana tsotra any ivelany.
Mpiasa any Gulf
Ny ankamaroan'ireo mpikatsaka asa. Jereo ny dosage isan'andro asa ao Dubai ho an'ny nahazo diplaoma Indiana. Satria ny toerana misy ny asa any ivelany no tsara indrindra ao amin'ny GCC. Fa andao hifanatrika izany, satria be dia be ny olona lasa mpiasa tsotra ao amin'ny Golfa. Tsy mikaroka izy ireo mba hahazoana fiainana tsara kokoa. Ny sasany amin'izy ireo dia milatsaka fotsiny eo am-piandohana. Fa maninona no mitranga ?. Satria sarotra ny fiainana. Ary tsy misy fomba mora handrosoana. Rehefa ela ny ela, dia ny hahazoan'ny olom-pirenena tsirairay avy. The Mpiasa iraisam-pirenena any Gulf miasa mafy be. Tsy misy fomba mora hahombiazana.
For searching and miasa any ivelany any Dubai. Mila manana fahasahiana ianao. Ny dingana rehetra ataonao dia misy ny valiny manokana. Lasa asa fanamoriana fatratra dia tsy asa mora. Mandeha sy mipetraka any amin'ny firenena hafa dia sarotra ihany koa ny fanapahan-kevitra raisina. Mieritrereta indroa alohan'ny hanapahanao fanapahan-kevitra. Miresaha amin'ny olona hafa monina any Arabia Saodita na any Koety. Mahazoa sasantsasany hevitra na dia ny mpitari-dalana anay aza. Tany am-boalohany, azo antoka fa hiasa any ivelany. fa miankina aminao ny fanapahana.
Ny iray amin'ireo fomba tsotra hanombohana asa any ivelany dia ny miasa ho mpampianatra any Dubai. Asa be karama ary mifanohitra amin'ny karama mahazatra momba ny asa any UAE. Ny sasany amin'ireo tolotra momba ny asa dia mety hiaraka rehefa manomboka aty ivelany ianao. Ary amin'ny ankamaroan'ny tranga, dia hiasa ho anao mandritra ny fotoana maharitra. Misokatra ho anao ny Golfa ho an'ny Indiana.
Asa iray any amin'ny Golfa
Tsy marobe ny lafin-javatra ratsy. Ny firenena any an-tsena amin'ny ankapobeny dia mafana entin'ireo expats. Ohatra Saudi Arabia sy ny Emira Arabo Mitambatra. Ny ankamaroan'izy ireo dia toerana tena mandroso. Ka raha tsy karazana ianao olona izay mitady ny fomba fiainana ny tanàna. Ny firenena Aris de Penisula dia azo antoka fa tsy ho anao. Ny zavatra ratsy kely eo amin'ilay helodrano dia mila manana fahazoan-dàlana hiasa ianao. Mila manana torolàlana momba ny torolàlana momba ny tanana ianao fomba hahitana asa amin'ny fitsidihana visa any Afovoany Atsinanana.
Tokony ho tsaroantsika koa amin'io fotoana io fa tsy ny mpanatanteraka Indiana ihany. Nahazo asa tany Golfa. Mbola misy firenena hafa izay mitady asa ao amin'ny GCC. Iray amin'ireo ohatra ireo i Pakistan. Hatramin'ny nisian'ny faritany ara-toekarena dia nanokatra varavarana ho an'ireo mpikatsahana asa Ny Emira Arabo Mitambatra dia manomboka mizara ireo vahiny avy any Pakistana. Ka na dia manapa-kevitra ny hifindra any amin'ny iray amin'ireo nofinofisinao hitady asa ianao. Hiatrika ianao fa mila miomana fa tsy ianao irery no io. Indrindra ao Dubai City.
Asa any amin'ny Hotel an'ny Golf ho an'ny Indiana
Misy tsaho miely momba ny gazety. Indrindra ny momba ireo Indiana izay miasa ao amin'ny hotely Emirates. Azonao atao mihitsy aza ny manamarina faritra iray Dubai City. Eny an-toerana dia afaka mahita amin'ny antsipirihany ny fomba nandraisan'ny indianina ny olona Arabo. Ho an'ny lohahevitra lehibe dia mila miteny isika. Ny tsara indrindra asa ho an'ny asa fandraisam-bahiny any Dubai. Tonga hatrany aloha ianao. Firenena sy fikarakarana any an-dranomasina. Ny ankamaroan'ireo vahiny manao asa any amin'ny hotely any Dubai. Na ny safidy manaraka dia mety i Abu Dhabi. Qatar dia Arabia Saodita miaraka amin'i Kuwait amin'ny farany. Ka tsy maintsy tadidinao momba ny asa any Golfa ho an'ny Indiana. Ho an'ny anao ny asan'ny hotely.
Ny trano fandraisam-bahiny Burj Al-Arab dia miala ny moron-dranomasin'i Dubai amin'ny nosy nataon'olombelona iray manokana, noho izany, ity hotely maoderina indrindra eran-tany ity !.
Governemanta manampy ny mpiasa Indiana
Ireo tarehimarika vao haingana dia nivoaka avy any amin'ny solontenan'ny governemanta Indiana. Ary mampiseho izany Tale ao Afovoany Atsinanana izany. Mahazo izany karama tsara izany. Ankoatra izany, misy ny fandrosoana eo amin'ny sehatry ny fitantanana ny 10%. Na inona na inona Gulf dia mivoaka avy any India. Mahazo eo amin'ny toeran'ny fitantanana zokiolona izy ireo izao. Ary koa, mampanantena ny fiovan'ny governemanta India ny fanovana ho an'ireo mpitady asa. Manantena ny famerenana ireo olana rehetra atrehan'ireo Indiana miasa any ivelany izy ireo izao niatrika ny asa matihanina.
Mahavariana fa na dia ny governemanta Emirà Arabo Mitambatra aza dia mbola miova ihany. Izay tsy hitanao akory aloha. Noho izany, ny mpanjaka Saodita sy Qatar dia handeha hanampy amin'ny fanovana ny dingam-panambadiana WhatsApp fandraisana mpiasa. Indrindra ho an'ireo mpikaroka amin'ny asa Indiana. Samy niara-niasa izy ireo hanatsarana ny fomba fiasa ho an'ny Indiana any amin'ireo firenena andrefana. Mpanapaka an'i Dubai. Nanome teny indrindra ho an'ny mpiasa avy any India.
Famaranana ho an'ny fiainan'ny Golfa
Asa an-tànana ho an'ny mpiasa Indiana. Mifindrafindra amin'ny firenena iray. Rehefa tonga any amin'ireo firenena Afovoany Atsinanana ianao. Tsy misy isalasalana fa hahazo traikefa be ianao. na dia fananganana fitaratry ny CV anao. Mazava ho azy, manome anao fahafaham-po be. Indrindra raha mitady asa ianao ary tsy avy amin'ny karazana fianakaviana manankarena. Mazava ho azy, raha mandao ianao dia tokony ho tonga any amin'ny faritra afovoany na eo amin'ny sehatra. Miaraka amin'io traikefa io, dia hanao izany ianao hampitombo ny fahafahan'ireo mpikarakara anao.
Amin'ny lafiny iray, raha mpianatra vao nahazo diplaoma ianao. Indrindra amin'ny fianarana MBA amin'ny fianarana MBA. Afaka manomboka amin'ny kilasin'ny mpiasa ianao. dia fikarohana fitohizan'ny asa tsara kokoa any Dubai. Amin'ny lafiny ratsy amin'ny toe-javatra ity. Mampalahelo fa mety tsy ilay zavatra andrasanao ny vola. Fa tsy maintsy mandeha manomboka any ianao. Taty aoriana, afaka mahazo vola betsaka noho ny inona ianao ireo mpitantana asa tongava eto. Fa ianao kosa tokony hanam-paharetana. Miasa isan'andro isan'andro amin'ny fahitana mazava momba ny ho avy.
Fanampiana amin'ny asa amin'ny Golf ho an'ny Indiana
Manampy Indianina izao izahay mba hahazo asa ao amin'ny Golfa
Ampidiro tsotra izao ny CV ary manomboha vaovao Asa amin'ny UAE!
Afeno ny famerenana ho any amin'ny faritra faran'izay haingana - Dubai City Company
Manome ny tsara ny orinasa City ao Dubai mpitarika ho an'ny asa any Dubai. Ny ekipanay dia nanapa-kevitra ny hanampy fampahalalana ho an'ny fiteny tsirairay ho anay Dubai mitsotra. Noho izany, amin'izao fahatsapana izao, afaka mahazo torolalana, toro-hevitra sy asa any Emirà Arabo mitambatra amin'ny fiteninao manokana ianao.